November 21, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Atletico Madrid oo garoonkeeda Wanda Metropolitano guul kaga gaartay kooxda Barcelona… +SAWIRRO
Cayaaraha November 21, 2020
(Madrid) 22 Nof 2020. Atletico Madrid ayaa garoonkeeda Wanda Metropolitano guul kaga gaartay kooxda Barcelona, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee kulanka adag ee Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Atletico. Daqiiqadii […]Sii akhriso
Man United oo garoonkeeda Old Trafford saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda West Bromwich Albion… +SAWIRRO
(Manchester) 22 Nof 2020. Man United ayaa garoonkeeda Old Trafford saddexda dhibcood kaga waadatay kooxda West Bromwich Albion, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 0-0 ah ay isku mari waayeen labada kooxood Manchester United iyo West Bromwich Albion. Qeybta labaad Sii akhriso
Wasiir Duraan Faarax: “Dalkeenna wuxuu is beddel ku gaari kara dib u heshiisiin iyo midnimo”
Soomaaliya November 21, 2020
Goldogob.(SONNA):- Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax ayaa degmada Galdogob ee gobolka Mudug maanta kaga qeybgalay kulan soo dhaweyn ah oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka, wax-garadka iyo maamulka degmada Galdogob. Kulankan oo qado ahaa ayaa lagu boggaadiyay dadaallada wasiirka ee ku aaddan Sii akhriso
(London) 21 Nof 2020. Tottenham Hotspur ayaa guuldarro xanuun badan gaarsiisay kooxda Manchester City, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League, Spurs ayaana si ku meelgaar ah hoggaanka ugu qabatay dhanka kala sarreynta horyaalka. Tottenham Hotspur ayaa guuldarro xanuun badan gaarsiisay kooxda Manchester City Qeybta hore ee Sii akhriso
(Madrid) 21 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona ee horyaalka La Liga ayaa la shaaciyey Kooxda Atletico Madrid ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Barcelona si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
(Manchester) 21 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester United iyo West Bromwich Albion ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Manchester United ayaa soo dhaweyn doonta naadiga West Bromwich Albion si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli […]Sii akhriso
Ethiopia News November 21, 2020
Ethiopia rejects African mediation, pushes toward rebel-held Tigray capital Reuters Secret UN report reveals fears of long and bitter war in Ethiopia The Guardian She fled Ethiopia’s fighting. Now she warns of ‘catastrophe’ The Associated Press Ethiopia says it captured Tigrayan town of Adigrat Al Jazeera Sii akhriso
Muqdisho.(SONNA);- Wasiir ku-xigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamuud Cabdullaahi Siraaji, ayaa maanta oo Sabti ah shir-guddoomiyay shirka todobaadlaha ah ee Agaasimayaasha Waaxyaha, iyadoo uu goob-joog ka ahaa Xoghayaha Joogtada, Mudane Danjire Maxamed Cali-Nuur Xaaji, waxaana loogaga hadlay dib u habaynta Sii akhriso
Secret UN report reveals fears of long and bitter war in Ethiopia – The Guardian
Secret UN report reveals fears of long and bitter war in Ethiopia The Guardian Ethiopia says it captured Tigrayan town of Adigrat Al Jazeera English Ethiopia Rejects African Mediation, Pushes Toward Rebel-Held Tigray Capital U.S. News & World Report She fled Ethiopia’s fighting. Now she warns of Sii akhriso
(Spain) 21 Nof 2020. Kooxaha Villarreal iyo Real Madrid ayaa ku kala baxay barbadhac 1-1 ah kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Real Madrid. Daqiiqadii 2-aad ee bilawgii ciyaarta Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay dheesha […]Sii akhriso